I-Meteora, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eMeteora
Bukela ividiyo emayelana neMeteora
Hlola iMeteora yinkimbinkimbi enkulu yamadwala amnyama angaphezu kwe-800 okungewona kuphela amatshe amangalisayo emhlabeni, kepha futhi yindawo ebaluleke kakhulu yeSonto Lobu-Orthodox. Ingokomoya nobukhazikhazi bemvelo baxoxa bodwa ukunikeza izinkulungwane zezivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba umuzwa wokuphila konke.
Iningi lezindela zama-30, elasungulwa ngekhulu le-14th, manje selilahliwe. Ayisithupha kuphela kuwo asavulekile futhi ahambisana namasiko enkolo kanye nokujula kobuNkulunkulu bezikhathi zakudala.
IMeteora ifakiwe esizeni samagugu emhlabeni.
Izinkomo eziseduzane neMeteora zazihlalwa ngokuqhubekayo phakathi kwe50,000 ne5,000 eminyakeni edlule. Isibonelo esidala kakhulu sokwakheka okwenziwe ngumuntu, udonga lwamatshe oluvimbe izingxenye ezimbili kwezintathu zomnyango wokungena emhumeni waseTheopetra, lwakhiwa eminyakeni eyi-23,000 eyedlule, mhlawumbe njengesithiyo emimoyeni ebandayo. Izingcweti ze-Μany Paleolithic ne-Neolithic zitholakele ngaphakathi kwemihume.
IMeteora akukhulunywa ngayo ezinganekwaneni zamaGrikhi noma ezincwadini zasendulo zamaGrikhi. Abantu bokuqala ukuhlala eMeteora ngemuva kwenkathi yamaNeolithic babeyiqembu lezindela zezindela.
Bahlala emigodini nasezifiyeni emibhoshongweni yamatshe, abanye baphakeme njenge-550m ngaphezulu kwethafa. Lokhu kuphakama okukhulu, kuhlanganiswe nobubanzi bezindonga zamawele, kugcinwe kude kodwa zonke izivakashi ezizimisele kakhulu. Kuqala, le mithi yayihola impilo yokuba yodwa, ihlangana kuphela ngamaSonto nangezinsuku ezikhethekile ukukhuleka nokukhuleka esontweni elakhiwe ezansi kwedwala
Ngasekuqaleni kwekhulu le-11th, izindela zazihlala emigedeni yaseMeteora. Kodwa-ke, amakhosi ezindela awakhiwa kuze kube ngekhulu le-14th, lapho izindela zafuna kwenye indawo ukucasha phambi kwenani elandayo lokuhlaselwa kweTurkey Greece. Okwamanje, ukufinyelela phezulu bekungama-ladders asuswayo noma i-windlass. Namuhla, ukusukuma kulula kakhulu ngenxa yezinyathelo eziqoshwe edwaleni ngesikhathi sama1920s '. Ezindlini zezindela ezingama-24, yi-6 kuphela (abesilisa abane, abesifazane ababili) abasasebenza, futhi indlu ngayinye ingaphansi kwabantu be-10.
Ku-1344, u-Athanasios Koinovitis ovela eMount Athos waletha iqembu labalandeli eMeteora. Ukusuka ku-1356 kuya ku-1372, wasungula isigodlo esikhulu sezindela i-meteoron ku-Broad Rock, eyayifanele izindela. Babephephile ekuphazamisweni kwezepolitiki futhi babenolawulo oluphelele lokungena esigodlweni sezindela.
Ekupheleni kwekhulu le-14th, umbuso WaseByzantine wabusa enyakatho Greece yayisongelwa ngokwengeziwe ngabahlaseli baseTurkey ababefuna ukulawula ithafa elivundile laseThesaly. Izindela zasesifundeni, zifuna ukubuyela emsebenzini owandayo wokuhlala eTurkey zathola izinsika zamatshe zaseMeteora ezingafinyeleleki njengesiphephelo esifanele.
Ukufinyelela ezindlini zezindela kuze kube yilapho ikhulu le-17th laliyindabuko futhi linzima ngamabomu, kudinga ukuthi kube nezitebhisi ezinde ezenziwe ndawonye noma amanetha asetshenziswa ukudonsa izimpahla kanye nabantu futhi zazidwetshwa noma nini lapho izindela zizizwa zisongelwa
Lezi zindela zenzelwe ukukhonza izindela nezindela ezilandela izimfundiso ze-Eastern Orthodox Church. Okuningi kwe ukwakhiwa kwalezi zakhiwo yi-Athonite kwasekuqaleni.
Ezindlwini eziyisithupha ezisebenzayo, i-Holy Monastery yaseSt. St. Monastery eNgcwele yaseRoussanou kuhlalwa kuzo izindela ngenkathi okuseleyo kuhlalwa yizindela. Isamba sonke sezakhamizi zezindela zaseMeteora e2015 bekuyi-56, okuhlanganisa izindela ze15 ezindlini ezinezindela ezine kanye nezindela zakwa41 ezindlini zezindela ezimbili. Izindela manje seziyizindawo eziheha izivakashi.
Isigodlo seGreater Meteoron yisona esikhulu kunazo zonke sezindela ezitholakala eMeteora, yize e2015 bekukhona izindela ze3 kuphela. Yakhiwa maphakathi ne-14th century futhi kwakuyisihloko sokuvuselelwa kanye namaphrojekthi wokuhlobisa e-1483 nase-1552. Isakhiwo esisodwa sisebenza njengomnyuziyamu ophambili waseFolklore weSonto Heirloom, onezitsha zakudala zethusi, zobumba nezesikhishini sokhuni. Isonto eliphambili, elizinikezelwe ukuhlonipha ukuguqulwa kukaJesu isimo lamiswa maphakathi nekhulu le-14th ne1387 / 88 futhi lahlotshiswa nge1483 nase1552.
Isigodlo se Varlaam iyisigodlo sesibili ngobukhulu eMeteora tata, futhi e2015 yayinenani elikhulu kakhulu lezindela (eziyisikhombisa) zezindela zezinduna. Yakhiwa nge-1541 futhi yahlanganiswa ne-1548. Isonto, elinikezelwe Kubo Bonke Osanta. Yakhiwa nge1541 / 42 futhi yahlotshiswa nge1548. Indawo yokuhlola endala isetshenziswa njengemnyuziyamu ngenkathi enyakatho yebandla kunguhlaka lweBishophu Abathathu, olwakhiwe nge1627 futhi luhlotshiswe nge1637
Isigodlo saseSt Stephen sinebandla elincane elakhiwa ngekhulu le-16th futhi elihlotshiswe e1545. Lesi sgodlo sisethafeni kunokuba sigqibe. Kwagqitshwa amaNazi ngesikhathi sempi yezwe yesibili okholelwa ukuthi kwakugcina abashokobezi futhi kwashiywa futhi nempahla eningi yobuciko yebiwe. Isigodlo sanikezwa izindelakazi e1961 futhi sebeyakhile kabusha baba yinqolobane echumayo, nezinduna ze28 ezazihlala e2015. Isonto elincane le-St Stefanos yi-basilica eyindawo eyodwa, eyakhiwe e-1350.
ISt Charalampos (1798) i-Holy Altar isiphendulwe umnyuziyamu wesimanjemanje onezimpawu ezihlaba umxhwele kakhulu zesonto: Imibhalo, izithonjana ze-Byzantine, ama-canonicals nezindwangu ezihlotshiswe ngegolide, fretwork, izicucu ze-silverware njll.
I-Agia Triada itholakala edwaleni elijwayelekile nelinqabile laseMeteora, isebenza kusukela 1362. Isonto esilibonayo namuhla lakhiwa cishe nge-1476 futhi liyisonto elincane elinjengezinsika ezinezinwele eline-dome. Okunye okuhlaba umxhwele kakhulu iMonastery Folklore Museum eqhosha ngokukhethwa okuningi kwezingubo ezindala, izinto zokwenza izinto, amathuluzi nezinye izinto zasekhaya.
IRoussanou yakhiwa e1529 emanxiweni okwakhiwa okudala.
I-Agios Nikolaos Panausas iyi-multilevel, enomusa futhi ebabazekayo eNgcwele i-Monastery etholakala eduzane naseKastraki Village. Indlela ehlelekile yokuhlala kule ndlu yezindela yasungulwa phakathi namashumi eminyaka okuqala ekhulu le-14th. Ama-frescos yimidwebo wakudala osayiniwe.
Ngama-Easter, izindela eziseMeteora ziqinisekisa ukuthi uzozwa ukuthi lezi zinsuku zikhuluma ngani ngempela. Zizwa ukumangala nenjabulo futhi uvumele ukuthobeka kukuholele emkhathini oyinqaba wokuhlanzwa.
Ngesikhathi seviki eNgcwele, isisindo siqala e-19: 00 bese siqeda ngase-21: 00. Pakati kwamabili ngoMgqibelo wePhasika lapho kumenyezelwa uvuko, iminyango yezindlu zezindela ivulekile ukwamukela labo abafuna ukuya kuyo yonke inkambiso yenkolo.
UMaundy uLwesine uhlukile esigodlweni sezindela saseVarlaam ngobuningi bokugcina. Emisindo ekhalayo yezinsimbi ezikhalayo ngokudabukisayo, amakholwa abamba iqhaza kumdlalo waphezulu ukuthola ukuphakama ngokomoya nangokokuziphatha uqobo.
NgoLwesihlanu Olungile, ama-Epitaphy ahlotshisiwe futhi iphunga lempepho ne-lilac ligcwalisa umkhathi. Izithonjana zibonakala zikhala ekhanyayo ekhanyayo. Izivakashi ezizinikele zezindela zithembisa amakhanda azo ngokuzithoba futhi ziphefumula ngokuzola endaweni okubonakala sengathi isikhathi simi kuso.
NgeSonto le-Easter nezinsuku ezilandelayo futhi, kufanelekile ukuvakashelwa. Iphunga lewundlu elosiwe linisela amaphaphu akho yonke indawo, kuyilapho izitsha ze-Ista ezihlobene paspaliáres (= amaphayi enziwe ngefulawa yommbila futhi abhakwe ezimbizeni zobumba) ne-basiordí (= ingulube egcinwe emafutheni ayo) kanye nenani elingapheli lewayini likuphinda kabili injabulo yokucula nokudansa lapho.